सिनेमा हल दसैंमा पनि नखुल्ने
आईपीएलमा कोलकाताको दोस्रो जित
बागलुङ कालिका माताको दर्शन गरि विहिवार (आज) को राशिफल हेर्नुहोस्
अहिले बजारमा जसको चर्चा छ !
“आजको काम आजै, टाढाको लागि प्राथमिकता”: कार्यवाहक अध्यक्ष बुढाथोकीको प्रतिबद्धता
भदौं महिनाको बिजुलीको बिल असोज २२ सम्म नतिरे थप दस्तुर लाग्ने
कांग्रेस १४औं महाधिवेसन, पुरानै ‘लिगेसी’ पछ्याउँदै नेताहरू
प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न : बिनालाई के गर्ने हो ?
बलिउड अभिनेत्री करिना कपूले हालैमात्र आफू चाँडै आमा बन्न लागेको घोषणा गरिन् । गर्भवती भएको अवस्थामा पनि उनी लगातार काम गरिरहेकी छन् । कोरोना महामारीका कारण उनले कैयौं विज्ञापनको सुटिङ घरबाटै गरिन् । हालैका दिनमा उनी स्टुडियो बाहिर फोटोसुटका लागि पनि निस्किइन् । यसअघि पनि तैमूर पेटमा रहँदा उनी ‘वीरे दी वेडिङ’को सुटिङ गरेकी थिइन् । उनले बेबी बक्पका साथ र्याम्प पनि नापेकी छन् । करिना मात्र एक्ली अभिनेत्री होइनन्, जो गर्भवती समयमा पनि सुटिङमा व्यस्त भइन् ।
सन् २०१० मा अभिनेत्री काजोल दोस्रोपटक गर्भवती हुँदा उनी करण जोहारको फिल्म ‘वी आर फेमिली’को सुटिङ गरिरहेकी थिइन् । यो समयमा काजोलले फिल्मको एक गीतमा नृत्य गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । तर करणले कोरियोग्राफरलाई काजोललाई सजिलो हुने खालको डान्स स्टेप सिकाउन आग्रह गरेका थिए । फिल्म रिलिजको तीन दिन पछि अर्थात् सेप्टेम्बर १० मा उनले युगलाई जन्म दिइन् ।
अभिनेत्री जया बच्चन फिल्म ‘शोले’को सुटिङका समयमा गर्भवती थिइन् । सन् १९७४ मा जयाले श्वेतालाई जन्म दिएकी थिइन् । सुटिङका समयमा यस्ता कैयौं दृश्य थिए, जहाँ जयाले बेबी बम्प लुकाउन क्यामराले परबाट खिचिएको थियो ।
अभिनेत्री जुही चावलाले सन् २००१ मा पहिलो बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् । जुही त्यो समयमा दुई फिल्म ‘एक रिस्ता’ र ‘आम्दानी अठ्ठनी खर्चा रुपया’को काम गरिरहेकी थिइन् । सन् २००३ मा जुही जब दोस्रो पटक गर्भवती भइन्, त्यो बेला उनी फिल्म ‘झंकार बीट्स’को सुटिङ गरिरहेकी थिइन् । त्यो समयमा उनी गर्भवती महिलाकै भूमिकामा फिल्ममा थिइन् ।
सन् १९९७ मा रिलिज फिल्म ‘जुदाई’को सुटिङको समयमा श्रीदेवी गर्भवती थिइन् । त्यो समयमा उनी आफ्नो ठूली छोरी जाह्नवी जन्मदन लागेकी थिइन् । श्रीदेवी मेटरनिटी ब्रेकभन्दा अघि सुटिङ पुरा गर्न चाहन्थिइन् ।
अभिनेत्री कोंकण सेन शर्माले सन् २०१० मा फिल्म ‘मिर्च’ र ‘राइट या रङ’को सुटिङ पुरा गरिन् । त्यो समयमा उनी गर्भवती थिइन् । कोंकणाले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार फिल्मको प्रमोसनमा पनि हिस्सा लिइन् । सन् २०११ मार्च १५ मा उनले छोरा हरुनलाई जन्म दिइन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहिबार, भदौ १८, २०७७ १९:५३:४०
मेलम्चीको बहानामा बिना मगरको थमौती!
सैफले साथ छाडेपछि बेहाल भइन् सारा !
म्युजिक भिडियोमा मोडल सरु धिमालको विकिनी अवतार (भिडियो)
यी सुन्दर अभिनेत्री जस्ले ४० कटेसी विवाह गरे !
बलिउडका चर्चित अभिनेत्रीको बयानले हल्लियो बलिउड !
अनुराग कश्यपलाई प्रहरीले बोलाएपछि …
बिग बोसबाट आउट भइन् निया !
कतिमा कारोबार हुँदैछ आजको सुनचाँदीको मुल्य ?
आमाको पछ्यौरी ! दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस